GNU / Linux Distribution Repositories: Ny kanto fanangonana azy ireo! | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | | Nohavaozina tamin'ny 06/06/2018 00:56 | Tutorials / Manuals / Tips
Lisitry ny fitoviana amin'ny repositories an'ny fizarana GNU / Linux
Ny toerana fitahirizana dia ekipa iray amin'ny Internetizany hoe mpizara izay mampiantrano programa manokana ho an'ny Linux Operating Systems iray na maromaro, ary amin'ny ankapobeny dia namboarina mba ho azo alefa amin'ny alàlan'ny console na manager package package, na dia amin'ny tranga hafa aza dia misy ny fidirana amin'ny alàlan'ny Web Browser.
Ny fampiasana ny Repositories ho an'ny Linux dia manome antsika tombony fa voamarina ireo programa hita ao amin'ireny toerana fitahirizana ireny amin'ny alàlan'ny Community Software Free sy ireo fizarana tsirairay avy izay mamorona sy manohana azy ireo, noho izany dia kely indrindra ny olana azo antoka hampiasana azy ireo.
1 Fampidirana ny fampiasana ny Repositories
2 Firafitry ny toerana fitahirizana
3 Mifanaraka eo amin'ny Repositories
Fampidirana ny fampiasana ny Repositories
Na dia samy mampiasa ny toerana anaovany azy aza ny Distro tsirairay, ny ankamaroan'izy ireo dia mirakitra programa mitovy na mitovy aminy (fonosana) azo ampiasaina eo amin'ny Distros isan-karazany, Ka ny idealy dia ny mahay mampiasa trano fonenana ivelany iray na iray hafa mba hampitomboana ny sandan'ny rafitra fiasanay tsirairay avy.
Ary amin'ity famoahana ity dia manantena izahay fa hanome an'izany ny tanjona, fa tsy maintsy fantarintsika aloha ny fomba fananganana ny Repositories ary avy eo afaka mahita hoe iza no mifanaraka amin'ny iray hafa ary miroso amin'ny fampiasana azy ireo.
Ubuntu 18.04 Rindrambaiko fampiharana sy fanavaozana ny fikandrana
Firafitry ny toerana fitahirizana
Matetika, ny Standard Repository dia manana làlana na fanaingoana mitovy amin'ilay aseho etsy ambany:
Ohatra tsipika fitehirizana ho an'ny DEBIAN Jessie (8):
Ohatra lehibe kokoa amin'ny fisie mahazatra list.list, izany hoe ny fisie fikirakirana efa voafaritra mialoha mba hamonjy ireo tsipika fidirana sy fananganana ireo Repository azon'ny Distro, ohatra, in DEBIAN Jessie (8) dia izao manaraka izao:
Mint 18.2 «Rindrambaiko niavian'ny rindrambaiko» Window fampiharana
Ny saha tsirairay amin'ny firafitry ny Repository dia midika hoe:
deb: Manondro fa ny Repositories dia tsy misy afa-tsy fonosana voaangona, izany hoe ireo fonosana fametrahana (binaries)
deb-src: Manondro fa ny Repositories dia tsy misy afa-tsy ny kaody loharano amin'ireo fonosana voaangona misy, izany hoe ireo fonosana loharano.
http:// - hanondroana fiaviana azo amin'ny mpizara tranonkala
ftp: // - ho an'ny fiaviana azo alaina amin'ny mpizara FTP
CD ROM: // - ho an'ny fametrahana avy amin'ny CD-ROM / DVD-ROM / Blue-ray
fisie: // - hanondroana fiaviana eo an-toerana napetraka ao amin'ny firaketana ny rakitra
ftp.xx.debian.org ==> xx dia mifanaraka amin'ny firenena niavian'ny mpizara
server_name ==> mety ho zavatra hafa rehetra izay misy DEBIAN.
tsy maintsy: Azo ampiharina amin'ny rafitra fiasa mifototra amin'ny DEBIAN.
distro_name: Misy anarana hita ao amin'ny Server mba hanondroana distro hafa na karazana fonosana manokana ao anatiny.
foana: Imbetsaka dia tsy misy na inona na inona amin'ity toerana ity, izay manondro fa izay rehetra misy dia natao ho an'ny Distro tokana.
Amin'ny tranga DEBIAN, manondro ireo kinova nalefa teny an-tsena, ohatra:
Ny DEBIAN Repositories dia mizara ho Versions:
OldStable (Old stable): Version izay mitahiry ireo fonosana an'ny an'ny Stable Version of DEBIAN taloha. Ity dia an'ny an'ny Jessie Version.
Tafatoetra: Version izay mitahiry ireo fonosana an'ny an'ny Stable Version DEBIAN ankehitriny. Ity dia an'ny Stretch Version.
Fitsapana: Version izay mitahiry ireo fonosana an'ny an'ny Stable Version DEBIAN ho avy. Ity dia an'ny an'ny Buster Version.
Tsy milamina: Version izay mitahiry fonosana an'ny fonosana ho avy izay eo andalam-pamolavolana sy fitiliana hatrany, izay mety ho an'ny Testing Version an'ny DEBIAN. Io dia an'ny an'ny SID Version foana.
Fanamarihana: Imbetsaka ny anaran'ny kinova matetika no ampiarahina amin'ny tovona "-updates" na "-proposed-fanavaozana" mba hanasongadinana fa nilaza ny fonosana voatahiry ao, na dia ao anatin'io kinova io aza izy ireo, dia mazàna no havaozina kokoa, satria vao tsy ela akory izay no avy amin'ilay kinova avo lenta avy hatrany. Amin'ny fotoana hafa rehefa miresaka momba ny Security Repository dia matetika "/ fanavaozana" ny premique.
Amin'ny tranga DEBIAN, ny Repositories dia manana sampana 3:
Main: Sampana mitahiry ny fonosana rehetra tafiditra ao amin'ny fizarana ofisialy DEBIAN izay maimaimpoana araka ny Tondrozotra Rindrambaiko MAIMAIMPOANA DEBIAN. Ny fizarana ofisialy ny DEBIAN dia ao amin'ity Sampana ity.
Contrib (fandraisana anjara): Sampana mitahiry fonosana izay nomen'ny mpamorona fahazoan-dàlana maimaim-poana ho azy ireo, saingy manana fiankinan-doha amin'ny programa hafa tsy maimaimpoana izy ireo, izany hoe, lozisialy misokatra misokatra izay tsy afaka miasa raha tsy misy singa manana. Ireo singa ireo dia mety ho lozisialy avy amin'ny faritra tsy andoavam-bola na rakitra an-tsokosoko toy ny lalao ROM, BIOS ho an'ny console, sns.
Tsy maimaim-poana: Sampana mitahiry fonosana misy fepetra momba ny fahazoan-dàlana mavesatra izay mametra ny fampiasany na ny fizarana fizarana, izany hoe, misy rindrambaiko tsy manaraka (tanteraka) ireo fotopoto-pitsipika ireo kanefa mbola azo zaraina tsy misy ferana.
Hahafantatra ireo an'ny Distro tsirairay, tena azo antoka fa tsy maintsy mijery ireo pejy ofisialin'ny tsirairay isika, izay azo antoka fa hanolotra tahirin-kevitra momba azy ireo izy ireo, toa ny Ubuntu y mint
Canaima GNU / Linux kinova
Mifanaraka eo amin'ny Repositories
Araka ny aseho amin'ny sary lohan'ny lahatsoratra sy etsy ambany, dia afaka mamintina mora foana isika amin'ny alàlan'ny fakana santionany ireo fizarana miorina na azo avy amin'ny DEBIAN izay misy fifandraisana mifanentana mivantana eo amin'ny famoahana ireo kinova samihafa amin'ny fizarana DEBIAN Meta sy ireo miorina na avy amin'izy ireo, toa an'i Ubuntu, Mint, MX-Linux, Canaima ary MinerOS.
Izany fifanandrifian-javatra izany dia mitranga, satria ny renin'ny Distros rehetra (DEBIAN) dia mamoaka kinova vaovao miaraka amina fonosana sy rindranasa vaovao., nafindra sy ampiharina amin'ireo kely kokoa izy ireo na ampifanarahana tsikelikely amin'ireo lehibe kokoa toa an'i Ubuntu ary avy eo mankamin'ny derivatives avy aminy.
Isaky ny fizarana Meta na Mother Distro ary ny derivatives na mifototra amin'izy ireo dia hisy ny lisitry ny fitoviana mitovy amin'ny repositories, koa manasa anao aho hahita sy hizara izany aminay, amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitrao.
Azontsika atao koa ny manampy toerana fitahirizana olona manokana ao amin'ny Distros sasany toa ny DEBIAN, toy ny aseho etsy ambany amin'ity lahatsoratra bilaogy taloha ity: Ahoana ny fomba hanampiana tahiry PPA amin'ny DEBIAN.
Manantena aho fa tianao ity lahatsoratra ity ary ilaina izany, mba hahafahanao mizara izany amin'ny tambajotram-pifandraisanao rehetra ary mampiroborobo ny Free Software sy ny fampiasana GNU / Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » GNU / Linux Distribution Repositories: Ny kanto amin'ny fanangonana azy ireo!
Pepejs dia hoy izy:
Asa tena tsara. + 1 + 1 + 1 + 1
Mamaly an'i Pepejs
Carlos Orellana Soto dia hoy izy:
Fandraisana anjara tombanana tsara! Mankany amin'ny favoris 😉
Valiny tamin'i Carlos Orellana Soto
Fahafinaretana hitondra anao zavatra ilaina sy manan-danja!
apt-getter dia hoy izy:
Ny zavatra iray tsy azoko momba ny tsingerin'ny fiainana ny kinova debian dia rehefa lasa antitra ny kinova ary tsy maintsy manova ny url ianao ao amin'ny rakitra loharano.list na dia voatondro aza ny kinova. Nahita milina tamin'ny famokarana aho izay tsy afaka nanavao raha tsy tsy nanova ilay rakitra voalaza.
Ny lahatsoratra iray momba izany dia hanampy olona maro ary hameno ity iray ity tanteraka.
Mamaly an'i apt-getter
Raha te hivoatra avy any Whezzy mankany Jessie ianao dia tsy maintsy manova ny fanondroana anarana ao amin'ny rakitra loharano. Tsy toy ny ao amin'ny Ubuntu izay mitondra rindrambaiko izay mamantatra kinova vaovao ary mifindra mandeha ho azy.